सावित्राको चोटले उब्जिएको प्रश्‍न
राष्ट्रिय महिला लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्, सवित्रा भण्डारी। बुधबार सावित्राको टिम एपीएफ विराटनगर महानगरपालिकाविरुद्ध मैदानमा थियो। तर, सावित्रा बैसाखीको सहारा लिएर खेल मैदान एन्फा मुख्यालयमा प्रवेश गरिन्।
सहयात्रीको बुइँ चढेर प्यारापिटको बस्ने ठाउँसम्म पुगेकी उनी त्यहीँ सीमित भइन्। जारी महिला लिग उनका लागि सकिएको केही दिन भइसकेको थियो।
त्यतिबेलासम्म सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि पक्का गरिसकेको थियो। त्यो पनि दुई खेल खेल्न बाँकी हुँदै। बुधबार पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबबीचको खेल १-१ को बराबरीमा टुंगिएपछि एपीएफले दुई खेल बाँकी हुँदै उपाधि पक्का गरेको थियो।
एन्फा मुख्यालयको मैदानमा आमी र पुलिसको बराबरीलगत्तै भएको खेलमा एपीएफले विराटनगरलाई १-० ले पराजित गर्‍यो। एपीएफले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जित्दै खुसी मनायो। एपीएफले १२ खेलसम्म अपराजित रहँदै लिगको उपाधि उचाल्ने औपचारिकता शुक्रबार पूरा गरिसकेको छ। बैसाखीको सहारामै सावित्रा पनि खुसी मनाउन सामेल भइन्।
उपाधि जित्‍नु एपीएफका लागि सुखद् पक्ष थियो। तर, त्यही क्रममा एपीएफले टिमका स्टार खेलाडी सावित्रालाई लामो समयका लागि गुमाउनुपरेको छ। एपीएफ मात्र होइन, नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमले पनि ‘गोल मसिन’सँग लामै समय बिछोडिनुपर्ने भएको छ।
टिमको जितमा सावित्रा खुसी भए पनि सायद एपीएफको पूरा टिमलाई त्यो खुसी खल्लो महसुस भइरहेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय टिम खुसी थिएन। नेपाली फुटबल समर्थक त झनै आफ्ना सबैभन्दा स्टार खेलाडीलाई बैसाखीमा देख्दा दुःखी थियो।
हो, सावित्रा अहिले घाइते छिन्। यही लिगअन्तर्गत विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबविरुद्धको खेलमा सावित्रालाई गम्भीर चोट लागेको थियो।
एन्फा कम्प्लेक्समा फागुन ३ गते भएको खेलमा घाइते भएपछि उनी मैदानमा क्षणभर पनि टिक्न सकिनन्। स्ट्रेचरमा रूँदै मैदान छाडेकी सावित्राको दायाँ घुँडाको भित्री भागमा हुने अत्यन्तै संवेदनशील एसीएल र मिडियल मिनिस्कसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यही भयानक चोटका कारण सावित्राले एपीएफको उपाधि जित्दा बैसाखीको सहारामा खुसी मनाउनुपरेको थियो।
टिमको जितमा खुसी मनाइरहे पनि सावित्राको अनुहारमा भविष्यप्रतिको चिन्ता प्रस्ट झल्कन्थ्यो। यो चोटले सम्पूर्ण फुटबलप्रेमीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। जुन सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भइसकेको छ।
‘‘सावित्रा नहुनु टिमका लागि ठूलो घाटा हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि घाटा हो। देशका लागि अझ ठूलो घाटा हो,’’ एपीएफका प्रशिक्षक भगवती थापाले उपाधि जितेपछि भनिन्।
करिअरको उच्च फर्ममा रहेकी सावित्रालाई यो चोटले ठूलो घाटा पुर्‍याउन सक्छ। नेपाली महिला फुटबलमा उनको दाँजोमा आउने खेलाडी तत्काल छैन। नेपालमा मात्र होइन, सावित्रा दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट खेलाडीमध्येकी एक हुन्। उनले भारतको सेथु एफसी र गोकुलम केरेला एफसीबाट गरेको प्रदर्शनले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। भारतीय लिगमा उनले आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेकी छिन्।
सावित्रा अब कम्तीमा पनि एक वर्ष मैदानबाहिर रहने पक्का छ। त्यसपछि मैदान फर्किए पनि उनले पुरानै लय समाउन सक्छिन् भन्‍ने निश्‍चित छैन। जसका कारण सावित्राको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा नेपालका लागि सर्वाधिक ३८ गोल गर्ने कीर्तिमानी खेलाडी सावित्रा त्यो संख्या अझै थप्‍न चाहन्थिन्। गम्भीर चोटले नसताएको भए यो बढ्ने पक्का थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फड्को मार्ने क्रममा रहेकी सावित्रालाई यो चोट महँगो सावित हुन सक्छ। किनकि, सावित्राले जुन चोट बोकेकी छिन्, त्यसको सही उपचार हुन सकेन भने खेलाडीलाई पुनः लयमा फर्किन कठिन हुन्छ। प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार सावित्राको एसीएलमा चोट लागेको छ। तथापि, उनको अन्य रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वफिजियो सुरज भुषालका अनुसार एसीएल गएपछि खेलाडीलाई पुनः मैदान फर्किन कम्तीमा पनि नौदेखि १२ महिना समय लाग्छ। त्यो समय अझ लामो पनि हुन सक्छ।
त्यसकारण सावित्रा अब कम्तीमा पनि एक वर्ष मैदानबाहिर रहने पक्का छ। त्यसपछि मैदान फर्किए पनि उनले पुरानै लय समाउन सक्छिन् भन्‍ने निश्‍चित छैन। जसका कारण सावित्राको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा नेपालका लागि सर्वाधिक ३८ गोल गर्ने कीर्तिमानी खेलाडी सावित्रा त्यो संख्या अझै थप्‍न चाहन्थिन्। गम्भीर चोटले नसताएको भए यो बढ्ने पक्का थियो। तर, यो चोटका कारण उनको त्यो सम्भावना पनि अन्योलको बादलभित्र छिरेको छ।
घाइते हुनुको कारण
खेलाडी घाइते हुनु नौलो कुरा होइन। तर, एसीएल चोटले खेलाडीको करिअर नै धराप पर्नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सावित्रा मात्र होइन, यसअघि अनु लामालाई पनि एसीएलमै चोट नै लागेको थियो। फुटबलमै विमल घर्तीमगर, रविन श्रेष्ठलगायतका खेलाडी एसीएल चोटबाट पीडित छन्। भलिबलकी प्रतिभा माली, बास्केटबलकी सविता खड्कालगायतका खेलाडी पनि घुँडाको चोटसँग जुधिरहेका छन्।
अर्थोप्लास्ट स्र्पोट्स सेन्टरका निर्देशक भुषालका अनुसार विशेषगरी ल्यान्डिङ गर्दा, खेलाडीले डिरेक्सन परिवर्तन गर्दा, खुट्टा बटारिँदा वा अरू खेलाडीसँग ठोक्किँदा चोट लाग्छ। क्लबहरूले फिजियो नराख्नु, प्रशिक्षक तथा टिम व्यवस्थापनले फिजियोको कुरा नसुन्‍नु टिमका समस्या हुन्। जसका कारण खेलाडी घाइते हुने क्रम बढ्दो छ।
“एक खेलबाट अर्को खेलबीचको अन्तर ४८ देखि ७२ घण्टा हुनु आवश्यक छ। तर, हाम्रोमा २४ घण्टाको अन्तरमा अर्को खेल खेल्नुपर्ने बाध्यता छ,” भुषाल भन्छन्, “खेलाडीले राम्रोसँग आराम नपाउँदा पनि घाइते हुने क्रम बढ्दो छ।”
“यसमा हाम्रो गल्ती भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो पनि देखिन सक्छ। तर, सावित्राले मात्र नभई अन्य खेलाडीले पनि सबै खेलमा ९० मिनेट खेलेका छन्। तर, दुर्भाग्य सावित्रा घाइते भइन्। कतै न कतै हामी चुक्यौं होला। चोट नलागेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर, चोट लागेका कारण विभिन्‍न कोणबाट प्रश्‍न उठ्नु स्वाभाविक हो।”
भुषालको तर्कलाई एपीएफकी प्रशिक्षक थापाले पनि स्वीकार गरेकी छिन्। उनी भन्छिन्, “हाम्रो एकदम व्यस्त खेल तालिका छ। एक दिन बिराएर खेल खेल्नुपर्छ। एकदेखि सात गतेसम्म हामीले चारवटा खेल खेल्नुपर्‍यो। त्यो पनि सबै महत्त्वपूर्ण खेल थिए। त्यसकारण पनि खेलाडीहरू घाइते भइरहेका छन्। हाम्रोमा मात्र होइन अन्य टिममा पनि त्यस्तै समस्या छ।”
आखिर दोष कसको?
झट्ट हेर्दा व्यस्त खेल तालिका, एस्ट्रो टर्फमा खेलाउनु, फिजियो टिममा नहुनु, फिजियोको सल्लाह नमान्‍नु, न्युट्रिसियन नहुनु, त्यसअनुसारको डाइट नहुनु चोटका मुख्य कारण हुन सक्छन्। हुन त सबै सुविधाअनुसार नै खेल्दा पनि खेलाडी घाइते नहुने होइन। तर, लिगमा समान्य सजगता पनि अपनाएको देखिँदैन।
“हाम्रा क्लबहरूमा फिजियो नै हुँदैन। कोचिङ ट्रेनिङ गर्दा टिममा फिजियो, न्युट्रिसियन, मेडिकल टिम राख्नुपर्छ भनेर भनिए्को हुन्छ। तर, हाम्रो टिममा केही पनि हुँदैन,” राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वफिजियो भुषाल भन्छन्, “फिजियोको सल्लाह नै लिइँदैन।”
सावित्रा एक्लैले १० खेलमा सात ह्याट्रिकसहित ४३ गोल गरेकी थिइन्। उपाधि जितेको एपीएफले पनि विपक्षी पोस्टमा ७४ गोल गरेको छ। एपीएफले चौदण्डीगढीमाथि २२-० को नतिजा निकालेको थियो। त्यति फराकिलो अन्तरमा नतिजा आएको खेलमा पनि सावित्राले पूरै ९० मिनेट खेलेकी छिन्। यसको मतलब सहजै जित्‍ने खेलमा पनि प्रशिक्षकले आफ्नो मुख्य खेलाडीलाई आराम दिन चाहेको देखिँदैन। के प्रशिक्षकमा त्यति सामान्य ज्ञान पनि नभएको हो त?
“यसमा हाम्रो गल्ती भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो पनि देखिन सक्छ। तर, सावित्राले मात्र नभई अन्य खेलाडीले पनि सबै खेलमा ९० मिनेट खेलेका छन्। तर, दुर्भाग्य सावित्रा घाइते भइन्,” एपीएफकी प्रशिक्षक थापाले भनिन्, “कतै न कतै हामी चुक्यौं होला। चोट नलागेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर, चोट लागेका कारण विभिन्‍न कोणबाट प्रश्‍न उठ्नु स्वाभाविक हो।”
एन्फाले खेल तालिका बनाउँदा पनि ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन। तालिका अनुसार एपीएफले फागुन १ देखि ७ गतेसम्म चारवटा खेल खेल्नुपरेको थियो। व्यस्त तालिका हुँदा पनि खेलाडीले पर्याप्त आराम पाएका छैनन्।
“हामीले पछिल्लो समय एन्फाको एस्ट्रो टर्फमा धेरै खेल खेलेका छौं। तर, एस्ट्रो टर्फमा खेल्दा खेलाडी घाइते हुने सम्भावना बढी हुन्छ। एउटा खेल र अर्को खेलबीचको अन्तर पनि कम छ,” अर्थोप्लास्ट स्पोटर््स सेन्टरका निर्देशक भुषाल थप्छन्, “सबैभन्दा मुख्य कुरा टिममा फिजियो नहुनु र फिजियो सल्लाह नलिनु नै हो।”
विचार / अन्तर्वार्ता खेलकुद
त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लवविरुद्धको खेलमा बैसाखीसहित मैदानमा उपस्थित भएकी सावित्रा भण्डारी।
प्रकाशित: शनिबार, फागुन ८, २०७७ १०:१५
एपीएफले दुई खेलअघि नै लिगको उपाधि पक्का गरिसकेको थियो।
चोटका कारण सावित्राले बैसाखीको सहारामा उपाधिको खुसी मनाइन्।
घुँडाको भित्री भागमा गम्भीर चोट लागेका कारण उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ।
शल्यक्रियापछि सावित्रा पुरानै लयमा फर्किने निश्‍चित नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
लिगकी उच्च गोलकर्ता सावित्राले नेपालका लागि कीर्तिमानी ३८ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेकी छिन्।